Fanantenana fa handeha tsara hoe ny zava-drehetra?
"(Hoy Jesosy:) Matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 16:33 Mifalia mandrakariva amin’ny Tompo ; hoy izaho indray : Mifalia." Filipiana 4:4
Misy olona manana fanantenana adaladala, mihevitra ny faniriany ho tena zava-misy marina ka tsy mahita afa-tsy ny fahasambarany manokana: manjavona io fanantenana io raha vao mitranga ny aretina na zava-manahirana hafa. Izany fanantenana tsotsotra izany dia tsy haharitra ihany koa raha manaiky hijery ny zava-misy eo amin’ny fiainan’ireo manodidina antsika isika, zava-misy izay matetika mahavaky fo. Tsy tambo isaina ny fijaliana, fahadisoam-panantenana, tebiteby manodidina antsika!
Dia manjary poaka aty ilay fanantenana teo, manoloana fiainana izay tsy fantatra ny dikany. Fanantenana poaka aty… raha tsy hoe angaha misy fanantenana avy any an-kafa fa tsy avy eto amin’ity tany ity, fanantenana avy amin’Andriamanitra mihitsy!
Izany no mitranga rehefa ampidirintsika eo amin’ny fiainantsika ny Tompo Jesosy. Manjary ivon’ny fahasambarantsika Izy, manjary loharanom-pitokiana marina sy loharanom-panantenana velona. Niatrika ny faharatsiana tamin’ny endriny rehetra Jesosy, ary nandresy izany. Toa faharesena no fijery ny fahafatesany, kanefa raha ny marina, dia fandresen’ny fitiavana ary fanokafan-dalana ho amin’ny fitsanganana amin’ny maty. Dia afaka amin’ny tahotra ny ho faty ny mpino, ary mitodika amin’ny fanantenana.
Ny Tompo dia efa manomana sahady ny Fiangonany, izay voarafitry ny mpino rehetra, mba hiara-mizara aminy ny voninahiny any an-danitra, ary hametraka ny fanjakany feno fiadanana eto amin’ity tany feno tebiteby ity. Ahoana moa ny mpino no tsy hatoky fa handeha tsara avokoa ny zava-drehetra, raha toa ka Jesosy no hany fanorenana azony ianteherana, mba hananany antoka momba ny hoavy … sy momba ny andro rehetra iainana?